QM: Daacish Waxay Dishay 231 Qof oo Shacab ah
Xafiiska Xuquuqda Aadanaha QM ayaa maanta sheegay inay hayaan “warbixino la isku haleyn karo” oo tilmaamaya in dagaalyahanada kooxda Daacish ee dalka Iraq ay dileen 231 qof oo shacab ah oo isku dayayey inay ka qaxaan galbeedka magaalada Mosul.
Dilalkan ayaa lagu warramay inay dhammaantood ka dhaceen deegaanka al-Shifa intii u dhaxeysay 26-kii May iyo 3-dii June, waxaana dadka la dilay la sheegay inay doonayeen inay ka baxsadaan deegaanada ay haysato Daacish, una cararaan dhinaca kuwa ay maamulaan ciidamada Iraq.
QM ayaa sheegtay in sidoo kale ay weli baareyso warbixino ku saabsan dilal kale oo shacab loo gaystay oo ay diyaarado dagaal ka fuliyeen deegaanka Zanjilly ee galbeedka Mosul, halkaasi oo la sheegay in lagu dilay 50 illaa 80 qof oo shacab ah.
Dagaalka galbeedka Mosul ayaa socday tan iyo bishii Febraayo kadib markii ciidamada Iraq ay guul ka gaareen inay qabsadaan dhinaca bari ee magaalada.
In si buuxda ay u qabsadaan magaalada Mosul, ayaa guul u noqon lahayd ololaha ciidamada Iraq ay doonayaan inay kaga taqalusaan kooxda Daacish oo qabsatay qeybo badan oo ka mid ah dalka Iraq, oo Mosul ay ku jirto sanadii 2014.